အခမဲ့ဖိုရမ် | အခမဲ့ဖိုရမ်မှတ်ပုံတင်မည် | ထိပ်တန်း 20 ဖိုရမ် | ထောက်ပံ့ | နှိပ်ရာ
အကောင်းဆုံး 2004 ကတည်းကအွန်လိုင်းဖိုရမ်
ကုန်ကျစရိတ်, ကန့်သတ်, ဒါမှမဟုတ်ကြော်ငြာမရှိဘဲ
ပိုပြီး ...CDN ဆက်သွယ်မှု (Cloudflare)
ပုံမှန်အားသွင်းချိန် 0,1 စက္ကန့်
အသုံးပြုသူဘာသာစကား ၁၀၄ ခုရှိသည်
စတိုင်အဒ်မင် အသုံးပြု. ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း
ကိုယ်ပိုင် header ဂရပ်ဖစ်တိုတောင်းသော scroll
အများစုမှာနိုင်စွမ်း phpBB 4.3 XTE
Facebook ကနေတဆင့် login ဖြစ်နိုင်
ပို့စ်များကိုအတွက် # hashtag ထောက်ခံမှု
လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်တဲ့ function တွေနဲ့ quotes
Messenger ကို (Skype ကို Facebook က) ကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်
preview ကို, ရုပ်ပြောင်, လက်မှတ်ပေါင်း post
ခွင့်ပြုချက်နှင့် Access Control
Avatar, ရာထူး, အဆင့်မြင့်ပရိုဖိုင်းကိုဒေတာ
attachments နှင့်ပုံနှိပ်ပါကို Preview
mass e-mail နဲ့အသိပေးချက်များကို
မေးခွန်းများ, Mark မှန်ကန်သောအဖြေကို
cockpit ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း & အုပ်ချုပ်ရေး
ကျွမ်းကျင်သူဖိုရမ် Facebook ကအုပ်စုတစ်စုကျင်းပ!
အကောင့်တစ်ခုအမည်အား (သင့် subdomain) အတွက်တစ်ရွေးချယ်ရေးနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်သင့် e-mail လိပ်စာဖြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့အဓိကစီမံခန့်ခွဲသူ password ကိုသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ပေးပို့မည်စဉ်းစားပါ။ သငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှ spam များကိုသို့မဟုတ်ကြော်ငြာကိုလက်ခံရရှိဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေထိုသို့အီးမေးလ်ကသင်၏ spam များကို folder ထဲမှာသင့်ရဲ့အဓိကစီမံခန့်ခွဲသူစကားဝှက်ကိုသို့ပြောင်းရွေ့မည်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။
ဒီနေရာတွင်အများအပြား features တွေနဲ့လုံးဝအခမဲ့ဖိုရမ်ရ။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းလျင်မြန်စွာနဲ့အလွယ်တကူ, optimized အခမဲ့တဲ့ search engine ကိုဖန်တီးပါအခမဲ့ဖိုရမ်, တာဝန်ခံအခမဲ့အာမခံ။ သငျသညျရာထူးအသုံးပြုသူများသည်အုပ်စုများနှင့်ပိုပြီးဖန်တီးဖမ်းယူချီးမြှင့်, အရောင်များပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လျှောက်လွှာကိုသင်ချက်ချင်းကြောင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒကိုနှင့်အတွေးအခေါ်များကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုငျသညျ, အပြည့်အဝ functional ဖြစ်စေသင့်ရဲ့ဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်သင့်ရဲ့ဖိုရမ်တစ်ခု၏ပုံစံမျိုး, တစ်စက္ကန့်အနည်းငယ်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဆာဗာပေါ်မှာဖိုရမ်တပ်ဆင်၏အားထုတ်မှုနှင့်အလုပ်မနှမြော။ အသုံးပြုနိုင်စွမ်းအပေါ်ခေါင်းကိုက်ခြင်း, အသွားအလာနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင့်ရဲ့ဖိုရမ်နှင့်အတူလွန်ခဲ့သည့်အရာဖြစ်ပါသည်။
Account Name ကို [a-z နှင့် 0-9]: .freeboard.at
e-mail လိပ်စာ [ပြန်ဆို]:
AntiBot Enter [ ]:
Account Name ကို [a-z နှင့် 0-9]: e-mail လိပ်စာ: e-mail လိပ်စာ [ပြန်ဆို]: AntiBot Enter [ ]:
ဒီနေရာတွင်အများအပြား features တွေနဲ့လုံးဝအခမဲ့ဖိုရမ်ရ။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းလျင်မြန်စွာနဲ့အလွယ်တကူ, optimized အခမဲ့တဲ့ search engine ကိုဖန်တီးပါအခမဲ့ဖိုရမ်, တာဝန်ခံအခမဲ့အာမခံ။ သငျသညျရာထူးအသုံးပြုသူများသည်အုပ်စုများနှင့်ပိုပြီးဖန်တီးဖမ်းယူချီးမြှင့်, အရောင်များပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လျှောက်လွှာကိုသင်ချက်ချင်းကြောင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒကိုနှင့်အတွေးအခေါ်များကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုငျသညျ, အပြည့်အဝ functional ဖြစ်စေသင့်ရဲ့ဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်သင့်ရဲ့ဖိုရမ်တစ်ခု၏ပုံစံမျိုး, တစ်စက္ကန့်အနည်းငယ်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဆာဗာပေါ်မှာဖိုရမ်တပ်ဆင်၏အားထုတ်မှုနှင့်အလုပ်မနှမြော။ အသုံးပြုနိုင်စွမ်းအပေါ်ခေါင်းကိုက်ခြင်း, အသွားအလာနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင့်ရဲ့ဖိုရမ်နှင့်အတူလွန်ခဲ့သည့်အရာဖြစ်ပါသည်။ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေား Imprint ထံမှသက်ဆိုင်ပါသည်။
CDN ဆက်သွယ်မှု (Cloudflare)